खोप लगाएपछि पनि कोभिडको सङ्क्रमण हुनसक्ने जोखिम कति ?
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यखोप लगाएपछि पनि कोभिडको सङ्क्रमण हुनसक्ने जोखिम कति ?
विराटनगर / कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आएपछि महामारी अन्त्य हुने तथा सामान्य जीवनलाई पुनः सुरु गर्न सकिने साकारात्मक सोच बढ्दो छ ।
तर, खोप लगाए पनि केही व्यक्ति अझै पनि भाइरसबाट सङ्क्रमित भइरहेको पाइएको छ । साथै, खोप लगाएपछि आफू सङ्क्रमित नभए पनि अरूलाई सङ्क्रमण सार्ने सम्भावना अझै पनि रहन्छ । हालको समयमा विभिन्न प्रकारको खोप प्रयोगमा आए पनि सबै शतप्रतिशत प्रभावकारी हुने भने देखिएको छैन ।
कम समयमा बनाइएका यी खोपहरू नयाँ र प्रयोगात्मक छन् । साथै, केही खोप अझै अध्ययनको क्रममा नै रहेका छन् । खोप लगाएपछि शरीरले भाइरसविरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न थाल्छ । तर, केही व्यक्तिलाई सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि योमात्र काफी नहुन सक्छ । दुर्लभ अवस्थामा खोप लगाएमा मानिस पनि एकपटक मात्र नभएर पटकपटक सङ्क्रमितसमेत हुन सक्छन् ।
सङ्क्रमण एकदम हल्का वा एसिम्प्टोम्याटिक हुने कारण सङ्क्रमण भएको हो वा होइन भनेर छुट्याउन पनि गाह्रो हुनसक्छ । एकपटक खोप लगाएपछि पनि पुनः भाइरल सङ्क्रमण हुने खोपले काम नगरेको स्पष्ट सूचक होइन । खोपले काम गर्ने समय तथा खोप प्रसारित गरिएको तरिकामा केही गलत भएको हुनसक्छ । खोप लगाएपछि यसले तुरून्त काम गर्दैन ।
खोपले राम्रो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न केही दिनदेखि कयौँ हप्तासम्म लाग्न सक्छ । जसकारण खोप लगाएपछि पनि सावधानीका उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, हाल प्रयोग गरिएको खोपको एक डोजले मात्र काम गर्दैन । खोपले राम्रोसँग काम गर्नका लागि यसको दुबै डोज लिन जरूरी हुने बताइएको छ ।
यसैले खोपले काम गर्न समय लागेमा तथा खोपको दुबै डोज नलिएमा खोप लगाए पनि मानिस भाइरसको जोखिममा रहने हुन्छ । खोपले भाइरसको प्रसारणलाई नभई रोग र गम्भीरता दरलाई हटाउँछ । प्रयोगका लागि ल्याइएको अधिकांश खोपले बिरामी हुनबाट रोक्नका लागि काम गर्छ, अर्थात् भाइरसले शरीरमा समस्या ल्याउनबाट रोक्छ ।
तर, सङ्क्रमणबाट भने पूर्णरूपमा सुरक्षित गर्दैन । यस ज्ञानको अभावमा, खोप लिएका धेरै मानिसहरू अझै पनि रोगजनकको वाहक हुन सक्छन् र खोप नलिएकालाई सङ्क्रमण फैलाउन सक्छन् । खोपले गम्भीर बिरामी हुनबाट बचाउँछ । तर, पहिल्यै सङ्क्रमित भइसकेकाले भने खोप लगाए पनि एक मानिसले अरूलाई भाइरस सार्नबाट रोक्न सक्दैन ।
केही विज्ञका अनुसार खोप लगाए पनि आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि आवश्यक रोकथामका उपाय अपनाउन जारी राख्नुपर्छ ।